Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKWIKWỌ ASIAN Ndị na-egwu bọọlụ Turkish Chenk Tosun Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LifeBogger na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha na aha "Paşa“. Anyị Cenk Tosun Child Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ football 'smartphone' striker onye nwere ike iji ma ụkwụ na isi. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Cenk Tosun, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị n'ihu, ka Malite.
Akụkọ Cenk Tosun nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Cenk Tosun na 7th nke June 1991 na Wetzlar, Germany na nne ya, Selma Tosun (site na ezinụlọ ezinụlọ America) na nna, Şenol Tosun. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya si mba ọzọ.
Tosun tolitere na nwanne ya nwanyị, Ayşen Tosun na nwanne nna, Taner na ndị obodo Turkey na Germany.
N'oge ahụ, Tosun ya na nna ya, nne ya, nwanne ya nwanyị na nwanne nna ya bi n'otu ụlọ na-ele anya na osimiri Lahn na Wetzlar.
Ndị mụrụ Tosun so na ndị rutere mba ahụ dịka Gastarbeiter (ma ọ bụ 'ndị ọbịa') n'afọ ndị 1970.
Nne Tosun, Selma sitere na Ankara na nna ya si n'obodo Denizli nke Aegean. Nke a site na itinye aka pụtara Tosun Amụrụ German ma Turkish Site & Site.
Ihe papa m na nrọ rọrọ: Nrọ nna Tosun bụ ịghọ ụmụ amaala site na nwata. N'ụzọ dị mwute, Şenol hapụrụ olileanya football ya mgbe ọ bụ 15 afọ.
Nke a bụ n'ihi na ọ nweghị nkwado ego na ọ chọrọ ịchọta ọrụ ka mma ma nweta ego iji lekọta obere nwanne ya, Taner.
Mgbe ọ malitere ịrụ ọrụ, o kwere nkwa na ya ga-eme nwa ọ na-amụbeghị amụ (n'ọnọdụ a; Chenk Tosun) bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. Yak ise nte enye akanamde oro.
Cenk Tosun Biography - Nlekọta Ọrụ:
N'oge ahụ, kwa ụbọchị, ozugbo nna Tosun laghachiri n'ọrụ ya, ọ na-akpọrọ nwa ya nwoke, Tosun n'akụkụ aka nri nke ogologo oche ya na nwanne ya nwoke, Taner (nwanne nna Tosun) n'akụkụ nke ọzọ.
Ha niile ga-ebido ikiri teepu nke Gabriel Batistuta, Onye ama ama ama na mba Argentina nke anyị dere banyere akụkọ nwata. Şenol Tosun ga-ekwe ka nwa ya nwoke lelee vidiyo Argentine n'otu n'otu dị ka ụzọ isi tinye akara aka ya n'ime ya.
Oge Action mesịrị bịa, oge ahụ Şenol malitere imezu nrọ ya. Otu ụbọchị Şenol kụrụ nwa ya nwoke n'ogige ma kọọrọ ya;
“Nwa, achọrọ m ịgwa gị ihe. Achọrọ m ka ị kpọọ m dị ka Gabriel Batistuta ”
Nna Tosun malitere inye nwa ya ụkwụ siri ike ebe ọ rịọrọ ka ọ kpọọ Batigol. Mgbe ọ hụrụ ka ọ na - amalite inwe mmasị maka bọl n'oge ọ bụ 3 (1994), Şenol Tosun kpebiri ịdebanye nwa ya n'akwụkwọ nke otu ìgwè ndị ntorobịa nọ n'ógbè ahụ, SV 07 Raunheim onye nyere ya ohere iji gosipụta talent ya ọzọ.
Mgbe o tolitere na klọb maka afọ 3, nne na nna ya chere banyere ime ka nwa ha nwoke tolite na klọb a ma ama. Ọzọkwa, Tosun (nke dị n'okpuru ebe a) nwere ikpe na-aga nke ọma na usoro ntorobịa Eintracht Frankfurt.
Akụkọ ndụ Cenk Tosun - Nna nke Nna:
N'ịbụ ndị na-eme ihe omume football na Eintracht Frankfurt, Cenk Tosun nwekwara ọzụzụ onwe ya na papa ya bụ onye ọ kọwara dị ka onye siri ike n'echiche ọ bụla metụtara football.
Ọ bụ ihe ngosipụta nke mere ka enyere nwatakịrị Tosun aka na ntị mgbe ọ na-emehie egwuregwu bọọlụ. Otu ụbọchị, Şenol Tosun jụrụ nwa ya nwoke;
Maka oge a, Achọrọ m ka ị gbaa na aka ekpe gị nakwa na isi gị
Site na itinye aka, Şenol Tosun gara n'ihu ma machibido ma ọ bụ machibido nwa ya nwoke ịgba ụkwụ aka nri ya ruo nwa oge iji mee ka aka ekpe ya sie ike.
dị nnọọ ka Ross Barkley na Pedro Rodriquez, Cenk bụzi onye ukwu nke aka ekpe na isi.
Ọ na-ewute nwa nwoke 20 ka a gọnye ya na football mgbe ọ nọrọ ihe karịrị afọ iri na nwata.
Nke a bụ ihe gbasara Cenk Tosun, bụ onye hụrụ ihe na-adịghị mma na ndụ ya mgbe a jụsịrị ya na ọ gụsịrị akwụkwọ na football football na Frankfurt n'agbanyeghị oge nchere oge abụọ.
N'ikwu okwu banyere ya, o kwuru otu oge;
Anọ m na Eintracht afọ iri na anọ.
Nke a bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụrụ m onye nkuzi otu ndị ntorobịa m ọtụtụ oge karịa nna m,” o kwuru.
"M na-anọkarị n'ọnụ ụlọ mkpuchi Eintracht karịa n'ọnụ ụlọ nke m.
N'ezie, ebuburu m osisi n'ime obi m, echere m na m kwesịrị inweta ohere maka bọọlụ agadi.
ọ na-egbu mgbu ka ahapụ ya n'òtù ndị agadi. Ọ dịghị mgbe m chọrọ ịpụ.”
N'ụzọ dị mwute, nke a mere ọbụna mgbe ọ bụ onye na-edekọ ihe mgbaru ọsọ maka ndị ntorobịa. Mgbe o chechara oge abụọ, ọ na-eriju afọ ma kpebie ịhapụ Germany.
Tosun hapụrụ ezinụlọ ya na ndị enyi ya na Germany iji nweta onyinye sitere na Gaziantepspor na ndịda ọwụwa anyanwụ Turkey, ebe ọrụ ya dị elu malitere. N'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọ chọtara ụkwụ ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
Cenk Tosun Biography - Ihe omuma:
Mgbe o nyechara ihe mgbaru ọsọ 39 na oge abụọ maka Gaziantepspor, Tosun chere na ọ dị mkpa ịkwaga na klọb buru ibu iji lụọ ọgụ maka ebe ya. Beşiktaş ghọrọ ebe ọ na-aga.
N'ime oge abụọ mbụ ya na klọb ahụ, Tosun sọ mpi Demba Ba na Mario Gomez na nhazi usoro. N'okwu ya;
O kwuru, sị: "Amụtara m ọtụtụ ihe n'aka Demba Ba na Mario Gomez. “Site na ha, etolitere m ma nweta ọtụtụ ahụmahụ.”
Mgbe oge nke abụọ ya gasịrị, Tosun weere ebe etiti mgbe ọ gbasịrị ihe mgbaru ọsọ 21 wee nye aka ise dị ka Besiktas meriri nke abụọ n'usoro Super Lig.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ mụbara ihe mgbaru ọsọ ya, karịrị ndị isi ya, wee banye kpamkpam na mmalite XI. Tosun meriri ihe mgbaru ọsọ 42 maka klọb ahụ ihe dị ka afọ abụọ.
Mmalite nke aha otutu:
Tosun, mgbe ọ na-eme ihe mgbaru ọsọ bịara bụrụ onye a maara nke ọma n'ala nna ya site na aha aha "Paşa”, Okwu Ottoman nke sụgharịrị onye nwere ọkwa dị elu na ọchịchị ndị agha Ottoman, dị ka ọchịagha.
Ụdị ịgba egwu mgbaru ọsọ ya dọtara Everton, bụ onye na-eso ya na windo mbufe Jenụwarị 2018.
You maara ?? .. Everton kwụrụ ụgwọ nke bụ nnukwu 50 ugboro karịrị ụgwọ zuru ezu ọ na-efu ma Gaziantepspor na Besiktas ịbanye Tosun. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Cenk Tosun Nwunye:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-agba ọsọ German Turkish na-aga nke ọma (kpọọ ha; Mesut Ozil, İlkay Gündoğan, na Cenk Tosun nke anyị, wdg), e nwere nnukwu egwu ma ọ bụ enyi nwanyị.
A hụrụ nke a na onye nke Ece Akgürbüz onye ya na Cenk Tosun nọ na mmekọrịta ogologo oge. Ece Akgürbüz lụrụ Cenk n'oge ọfụma afọ 2016.
N'okpuru ebe a bụ foto agbamakwụkwọ ha n'oge ha gbanwere nkwa agbamakwụkwọ. Ha abụọ hụrụ n'anya.
Di na nwunye a choro otutu mmadu onwe ha na Instagram ma gosi ka ha na ibe ha.
Kemgbe agbamakwụkwọ ahụ, ndị Fans na-ese foto ka ha na-aga ebe a na-ekpo ọkụ gburugburu ụwa, gụnyere Las Vegas, Los Angeles, na New York.
A na-ahụ ha mgbe niile na ọnyà nke na-egosi ha ịnụ ụtọ ndụ ha. A na-ahụ ihe atụ n'okpuru.
N'okpuru ebe a bụ foto ọzọ nke Cenk Tosun na nwunye ya na ụgbọ mmiri. Perfectzọ zuru oke iji jiri ezumike ya.
Foto ọzọ nke di na nwunye ahụ bi na ya na ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma.
N'oge na-adịbeghị anya, ha abụọ guzoro ogwe aka na ogwe aka nke Oxford Street na London ka ha na-achọ ijide mba ha ga-akpọ ụlọ ugbu a.
Cenk Tosun Bio - Ntughari Ntughari:
E zigara Cenk Tosun maka Turkey mgbe ndị na-akwado ya na-awakpo nna ya ka ọ nọ na-egwu asọmpi ụwa.
E gosipụtara n'ihu ahụ kaadị uhie dị ọcha mgbe ọ hapụsịrị oghere ahụ ka ọ bụrụ ndị na-ebuso ndị iro ya ebubo, bụ ndị a kọrọ na ha gbalịrị ịwakpo ezinụlọ ya na-ere ọkụ. O doro anya na Tosun mere ihe na oke iwe.
A kọrọ na papa Tosun na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ gburu site na ọkụ ndị ọkụ gbara, ọ ga-nghọta kwere iwe na oke iwe.
N'ihi iwe na ọnụma ya, ndị otu egwuregwu ga-ejide Tosun n'ike. N'ezie, iwe were ya nke ukwuu n'ihe ọbụla ọ hụrụ. Lelee vidiyo n'okpuru;
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Tosun kwupụtara nkwupụta nke na-egosi na ọ kwara ụta maka mmeghachi omume ya, na-ekwu na ọ bụghị otú onye isi ụgbọ mmiri kwesịrị isi akpa àgwà. N'okwu ya na akwụkwọ akụkọ Turkish, o kwuru;
“Mgbe m tụgharịrị, m hụrụ ka mụ na nna m na ụfọdụ ndị agbụrụ ya sere okwu. Ijọ jidere m na ọ nwere ike imerụ ya ahụ site na iji ọkụ ha na ha nwere. Emehiere m n'ihi na amaghị m akụkọ ahụ dum. Ihe omume dị mkpa karịa football. Ọ bụ omume na-adịghị mma. Ana m arịọ mgbaghara. Ana m ekwe gị nkwa na ọ gaghị eme ọzọ. ”
Michael Michael Onye ofufe:
Cenk hụrụ n'anya na-ekiri NBA dịka ọ bụ nnukwu onye na-akwado Michael Jordan na nọmba NBA nke 23 nke akụkọ ahụ maka Chicago Bulls.
Oge ụfọdụ gara aga na mbido oge na Beşiktaş. Mario Gomez gwara ndị ọrụ klọb na;
“Al 9 bụ nke gị. Biko nara nọmba uwe elu ahụ ”
ma Tosun kwuru;
“Mba. Achọghị m uwe elu nọmba 9. Nọmba m bụ 23! ”
FAJỤ NA-ECHI: Daalụ maka ịgụAnyị Cenk Tosun Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.